Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. सुशान्तकी म्यानेजरलाई गर्भवती बनाएर आत्मह’त्या गर्न बा’ध्य पारेको आ’रोपमाथि सुरजले भने, ‘दिशालाई कहिल्यै भे’टेकै छैन’ – Janata Live
एजेन्सी । केही वर्षअघि नायिका जिया खानको मृ’त्युपछि वि’वादमा घेरिएका सुरज पंचोली एकपटक पुनः वि’वादित बनेका छन् । सुशान्त र उनकी पूर्व म्यानेजर दिशा सालियानको आत्मह’त्यामा सुरजको नाम मुछिएको छ । भारतीय मिडियामा प्रकाशित विभिन्न खबरका अनुसार दिशा र सुरज सम्बन्धमा थिए । दिशा गर्भवतीसमेत भएकी थिइन् तर सुरज उनीसँग विवाह गर्न चा’हँदैनथे ।
खबरमा बताइए अनुसार यसबारे सुशान्तलाई थाहा भएपछि उनले दिशालाई समर्थन गर्ने कोसिस गरे । सुरजको पर्दाफास गर्ने कोसिस गर्न थाले । यो विषयमा सुरजसँग उनको हा’तपात पनि बताइन्छ।
पछि बदलाको भावनाले सुरजको परिवारले सलमान र अन्डरवर्ल्डसँग मिलेर सुशान्तको ह’त्या गरिदिएको र अब शक्तिको प्रयोग गरेर यसलाई आत्मह’त्याको रुप दिइएको आ’रोपमा उल्लेख छ । यो थ्योरीलाई विश्वास गर्ने हो भने दिशाको आत्मह’त्याको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । दिशाले १४ औं तल्लाबाट हाम फालेर आत्मह’त्या गरेकी थिइन् वा कसैले उनलाई ध’क्का दिएको थियो भनेर प्रश्न सोधिँदै छ ।
यी सबै आरोपबारे सुरजले आफ्नो स्प’ष्टिकरणमा भने, ‘मलाई थाहा छैन कि सुशान्तसँग कुन चाहिँ हा’तपातको कुरा भइरहेको छ रु उनीसँग मेरो कुनै पनि वि’वाद भएको छैन । यसबारे मैले पहिले नै स्पष्ट गरेकी छु । दोस्रो कुरा के हो भने सलमान खान मेरो जीवनमा किन संलग्न हुने ? के उनीसँग अर्को काम छैन ? ’
सुरजले थपे, ‘हामी दुईबीच कहिले पनि केही दुश्मनी भएको थिएन । उनी मभन्दा सिनियर थिए र धेरै नै सफल पनि । म त उनको वरिपरि पनि थिइनँ । म नै उनको लिगमा थिएँ । मलाई उनको टाढाटाढासम्म पनि ख’तरा थिएन । उनले मलाई भाइजस्तो व्यवहार गर्दथे । हाम्रो जतिबेला भेट हुन्थ्यो तब हामी फिल्मबारे वा मेरो फिटनेस बारे कुरा हुन्थ्यो ।’